News | Saturngod
Download ထဲမှာ ထည့်ထားပေမယ့် အချို့တွေ download ချမရဘူးဆိုတာကြောင့် သီးသန့် http://books.saturngod.net ကို ဖန်တီးထားပေးပါတယ်။ ရေးလျက်စ HTML5စာအုပ်ကိုလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အခု Chapter3ရောက်နေပြီး မနက်ဖြန် chapter3ပြီးလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ မသိတာများရှိရင် တစ်ခါတည်း မေးလို့ရအောင် disqus comment system ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 April 9, 2013
Leaveareply iOS Bootcamp Day 2
1 Reply ဒီနေ့တော့ iOS bootcamp Day2ပြီးသွားပါပြီ။ မနက်ပိုင်းမှာ ကိုမျိုးကျော် က memory အကြောင်း ရှင်းပြပြီးတော့ သူ ဝယ်ထားတဲ့ video တွေကို မျှဝေပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် calculator app ကို မနက်ပိုင်း ၁ နာရီ လောက်ထိ သင်ဖြစ်တယ်။ ညနေ ပိုင်း အချိန်မှာတော့ Restful အကြောင်းရှင်းပြတယ်။ oAuth2အကြောင်း ရှင်းပြတယ်။ ပြီးတော့ Restful သုံးပြီး twitter လို app တစ်ခု ရေးဖြစ်တယ်။ GET , POST , DELETE မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ GET နဲ့ DELETE ပဲ ပြီးသွားပြီး POST ကို ဒီအတိုင်းပဲ ရှင်းပြလိုက်ရတယ်။ Restful ကိုတော့ AFNetworking သုံးပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ခါနီး FMDB ကို သုံးပြီး sqlite သုံးနည်း သင်ပေးခဲ့တယ်။ ထမင်းစားပြီးကတည်းက တောက်လျှောက် မနားပဲ သင်လိုက်ရတာ ကျွန်တော်လည်း အာတွေလည်း ချောက်ပြီး လည်ချောင်းတွေလည်း နာသွားတယ်။ ညနေ ၆ နာရီ ခွဲမှပဲ ပြီးတော့တယ်။ သင်ခံရတဲ့လူတွေလည်း ကျွန်တော် push လုပ်လိုက်တာ ခံရပြီး လိုက်လုပ်ရတာ တော်တော်လေးကို ပင်ပန်းသွားလောက်ပြီ။
ဘာပဲပြောပြော bootcamp လေး အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးသွားပါပြီ။ ကူညီပေးတဲ့ Bagan နဲ့ Revo Tech ကိုလည်း ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မောင်းသမျှ အနောက်ကနေ လိုက်လုပ်ပေးပြီး ခေါင်းပူအောင် code တွေ အတူတကွ ရေးခဲ့တဲ့ လူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုဇေယျာ နဲ့ အစ်မ သဇင် ကတော့ ကျွန်တော့် ထက် ပို ပင်ပန်းတယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီကို error တွေ လိုက်စစ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့တွေသာ မပါရင် ကျွန်တော်တို့ တွေ ဒီလောက်လုပ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။
ပင်ပန်းသွားပေမယ့် ဒီလူတွေ iOS နဲ့ မဝေးကွာပဲ တောက်လျှောက်ဆက်လုပ်နိုင်ရင် သူတို့ iOS app ကောင်းကောင်း တစ်ခုလုပ်နိုင်အောင် အခြေခံလေး ကျွန်တော်တို့တွေ ချထားပေးခဲ့နိုင်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged bootcamp, iOS on March 25, 2013 by saturngod. iOS Bootcamp , Yangon , Registration completed
Leaveareply သောကြာနေ့က register လုပ်တာကို website မှာ ပိတ်ပြီးတော့ စနေ နေ့မှာ လူ စာရင်းကို အကြမ်းပြုစု ကြည့်ပါတယ်။ Register လုပ်ထားသူပေါင်း ၂၁ ယောက် ရှိပါတယ်။ ၈ ယောက် ကတော့ macbook ရှိပြီးတော့ အဲဒီ ၈ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က programming အခြေခံ မရှိပါဘူး။ အဲဒီ ၂၁ ယောက်ထဲမှာ ဒီလို မျိုး လူ ရွေးချယ်ပြီးတော့ email ပို့ထားပါတယ်။
၁။ macbook ရှိပြီးတော့ Programming တတ်သူ
၂။ macbook မရှိသော်လည်း Objective-C တတ်ထားသူ ( ရုံးတွင် လေ့လာသူ ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ။ register လုပ်ထားတဲ့ သူ ၂ ယောက် ရှိပါတယ် )
၃။ C , C++ နှင့် Java တတ်ထားပြီး MVC နှင့် OOP ကို နားလည် ထားသူ
စသည်ဖြင့် ကျွန်တော် ရွေးချယ်ပြီး email ပို့ထားပါတယ်။ macbook မရှိတဲ့ သူတွေ အတွက် macbook ငှားပြီး လာဖို့လိုပါတယ်။
approve လုပ်ထားတဲ့ macbook မရှိတဲ့ လူ ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ကတော့ ခရီး သွားမှာ ဖြစ်လို့ မလာဖြစ်ကြောင်း email ပြန်ထားတဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ၁၁ ယောက်ပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အခု အချိန်ထိတော့ confirm လုပ်တာ ၂ ယောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ သင် register လုပ်ထားပြီး approve ရတယ်ဆိုရင် confirm လေး reply ပြန်ပေးပါ။ Revo Tech က ကိုမျိုးကျော် ပြင်ဆင် စရာတွေ ရှိတာ ပြင်ဆင်ထားလို့ ရအောင် လူစာရင်း အတိအကျ လိုအပ်လို့ပါ။
နောက်ပြီး ပွဲ အတွက် ကို ဝင်းလှိုင်ထွန်း က လိုအပ်တာတွေကို ကူညီဖို့ နောက်ပြီး question တွေကို ဖြေကြားဖို့ ကူညီပေးမယ်လို့ ဆိုထားသလို မသင်ဇင်နွယ်က instructor အနေဖြင့် ကူညီပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged bootcamp, iOS on March 17, 2013 by saturngod. MYO
Leaveareply ဒီနေ့ Zite ဖတ်ရင်း နဲ့ မျိုး အကြောင်းရေးထားတာ ဖတ်မိတယ်။ MYO ဆိုလို့ မြန်မာ နာမည် မျိုး နဲ့ ခပ် ဆင်ဆင်ပါပဲ။ leap motion လိုမျိုး GESTURE CONTROL တစ်ခု ပါပဲ။ တခြား GESTURE CONTROL နဲ့ မတူတာက သူက လက်မှာပတ်ထားရပြီးတော့ လက်ဖျံ က ကြွက်သားနဲ့ gesture ကို ထိန်းတာပါ။ ဒါကြောင့် camera မလိုပဲ နဲ့ gesture ကို အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ leap motion ကတော့ အထဲမှာ camera ၆ ခုလောက်နဲ့ gesture ကို control လုပ်ထားတာပါ။
leap motion ထက် မျိုး ကို ပိုသဘောကျတယ်။ iOS , Android အတွက် API ထုတ်ပေးမယ်ပြောတယ်။ လက်ရှိတော့ App တွေကော hardware တွေကော အများကြီး မရှိသေးပါဘူး။ Bluetooth ကို သုံးထားတဲ့အတွက် iPhone + MYO + Hardware ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို မိုက်တဲ့ product တွေ ဖန်တီးလို့ရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် XBMC ကို MYO နဲ့ တွဲ ပြီး သုံးရင်တော့ ကျွန်တော့် အိမ်က Media Center အတွက် အတော့်ကို ပြည့်စုံသွားပြီလို့ ဆိုရမယ်။ အခု Pre order ရပြီဆိုပေမယ့် ထွက်ပြီးမှ အခြားသူတွေ review လုပ်ပြီးမှ ပဲ စမ်းဝယ်ကြည့်တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged gadget on February 26, 2013 by saturngod. Link
Google Glass တပ်ထားရင် ဘာတွေ မြင်ရမလဲ ဆိုတာကို ပြထားတဲ့ Video လေးပါ။ အဲဒါကို ကြည့်ရင်း Sword Art Online နဲ့ Accel World ကိုတောင် သွားသတိရမိသေးတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 February 20, 2013
Leaveareply For iOS Bootcamp
Leaveareply ကျွန်တော်တို့တွေ ရန်ကုန်မှာ iOS bootcamp လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ iOS Bootcamp ဆိုတာကတော့ အဲဒီ ရက်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ iOS App Development ကို အခြေခံကနေ စသင်မယ်။ နောက်နေ့မှာတော့ sample project တွေ အတူတူ လုပ်ကြမယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ iOS Bootcamp လုပ်ရင် အများဆုံး လူ ၂၀ လောက်ပဲ လက်ခံနိုင်မယ်။ Mac book ရှိဖို့လိုမယ်။ OOP သိရမယ်။ Programming Language တစ်ခု တတ်ရမယ်။ ဒါမှသာ ကျွန်တော်တို့ Bootcamp မှာ သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Bootcamp မှာ ကျွန်တော်တို့ Programming language အခြေခံတွေ မသင်ပါဘူး။ Objective-C , MVC , Xcode စတာတွေကို အဓိက သင်ဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။
အခုထက်ထိတော့ စီစဉ်နေဆဲပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ပြဿနာက course ကို ဘယ်လောက်ထိ သင်နိုင်မလဲဆိုတာကို သိဖို့အတွက် လက်ရှိ လာတက်နိုင်မယ့်လူတွေ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ ကိုယ်ပိုင် Macbook ရှိရဲ့လား ? ကိုမျိုးကျော်ကတော့ Mac book မရှိတဲ့ လူတွေ လက်ရှိ PC laptop မှာ Mac နဲ့ Xcode run နိုင်အောင် hackintosh နဲ့ စမ်းနေတယ် ပြောတယ်။ အဆင်ပြေ မပြေတော့ ကျွန်တော် မသိသေးဘူး။ နောက်ပြီးတော့ iOS နဲ့ ရင်းနှီးရဲ့လား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Android က UI Concept နဲ့ iOS က UI Concept က တူသလိုရှိပေမယ့် မတူတာတွေ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ (ရန်ကုန်တွင် နေထိုင်သူများသာ) အနေနဲ့
လေးကို တချက်လောက် ဖြည့်ပေးကြပါ။ ရလာတဲ့ Result ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ လုပ်သင့်လဲ နောက်ပြီးတော့ ဘာတွေ သင်သင့်သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တွေ ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပါ။
အခုလက်ရှိတော့ Instructor အနေနဲ့ ကိုမျိုးကျော် (Revo Tech) ၊ ကိုဇေယျာ (Bagan Innovation Technology) နဲ့ ကျွန်တော် ။ စုစုပေါင်း ၃ ယောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ တကယ်လို့ iOS Bootcamp မှာ Instructor အဖြစ် ကူညီချင်ရင် ဒီ post က comment မှာ ထည့်ခဲ့ပေးပါ။
- Fixed the Form
- hackintosh က အများကြီး လုပ်ဖို့လိုတယ်။ VMWare Workstation သုံးပြီး PC laptop မှာ Mac OSX Moutain Lion နဲ့ Xcode ရေးလို့ရတယ်။ VMWare image ကို download ချချင်ရင် ဒီမှာ download ချလို့ရတယ်။ – ကိုမျိုးကျော် (Revo Tech) က ကျွန်တော့် ဆီ ပို့ထားတဲ့ message ပါ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged bootcamp, iOS on February 18, 2013 by saturngod. Fixed : Zawgyi Font for iOS 6.1
7 Replies Zawgyi font က iOS 6.1 မှာ [space]+​ေ နဲ့ [space]+​ြ စတာတွေ မပေါ်တာ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီ ပြဿနာကို အခု ပြင်ပြီးတော့ cydia.macforus.com မှာ update လုပ်ထားပေးပြီးပါပြီ။
Mac For Us repo မထည့်ရသေးသူတွေ အနေနဲ့
Cydia > Sources > Edit > Add > http://cydia.macforus.com ကို ထည့်လိုက်ပါ။
Cydia > Manage > Sources > Edit > Add > http://cydia.macforus.com ကို ထည့်လိုက်ပါ။
ဘာမှ မသွင်းခင် Package တွေ သေချာအောင် Cydia > Changes > Refresh လုပ်ထားလိုက်ပါ။
Zawgyi iOS 4.3 Font ကို Install သွင်းလိုက်ရင် iOS မှာ ဇော်ဂျီ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ Zawgyi iOS 4.3 Font သွင်းပြီးသား လူတွေကတော့
Cydia > Changes > Refresh လုပ်ပြီး update လုပ်လို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ deb လိုချင်ရင်တော့ http://cydia.macforus.com/deb/zawgyi-iOS43-font.deb မှာ download ချ လို့ရပါတယ်။
Keyboard ပြဿနာကတော့ @MoeSeth update လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in News and tagged cydia, iOS, Zawgyi on February 13, 2013 by saturngod. Post navigation
သမိုင်းထဲတွင် အနာဂတ်မရှိ။ သမိုင်းသည် အနာဂတ်ကိုသာ ပြသည်။ — saturngod Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod